နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် (၃၅)ကြိမ်မြောက် အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးနှင့် ဆက်စပ်ထိပ်သီးအစည်းအဝေးများ တက်ရောက်စဉ်ကာလအတွင်း Thai Red Cross AIDS Research Centre သို့ သွားရောက်လေ့လာခဲ့ခြင်းနှင့် အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်၊ ရုရှားဝန်ကြီးချုပ်၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသ | Myanmar State Counsellor Office
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် (၃၅)ကြိမ်မြောက် အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးနှင့် ဆက်စပ်ထိပ်သီးအစည်းအဝေးများ တက်ရောက်စဉ်ကာလအတွင်း Thai Red Cross AIDS Research Centre သို့ သွားရောက်လေ့လာခဲ့ခြင်းနှင့် အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်၊ ရုရှားဝန်ကြီးချုပ်၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသမ္မတ၏ အထူးကိုယ်စားလှယ်နှင့် အမျိုးသားလုံခြုံရေးအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာငွေကြေးရန်ပုံငွေအဖွဲ့အကြီးအကဲနှင့်ကမ္ဘာ့ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌတို့နှင့် သီးခြားစီ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့
၁။ ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ဗန်ကောက်မြို့တွင် ကျင်းပ ခဲ့သည့် (၃၅)ကြိမ်မြောက် အာဆီယံထိပ်သီး အစည်းအဝေးနှင့် ဆက်စပ်ထိပ်သီးအစည်း အဝေးများသို့ တက်ရောက်ခဲ့သည့်ခရီးစဉ် အတွင်း နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် King Chulalongkorn Memoral Hospital ရှိ Thai Red Cross AIDS Research Centre သို့ သွားရောက်လေ့လာခဲ့ပြီး နာယကများဖြစ်ကြ သော HRH Princess Soamsawali Korm Muen Suddhanarinatha နှင့် HRH Princess Bajarakitiyabha Narendiradebyavati တို့နှင့် သီးသန့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ ထို့ပြင် အိန္ဒိယ နိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ် H.E. Mr. Narendra Modi၊ ရုရှားဝန်ကြီးချုပ် H.E. Mr. Dmitry Medvedev နှင့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသမ္မတ၏ အထူး ကိုယ်စားလှယ်၊ အမျိုးသားလုံခြုံရေးအကြံပေး ပုဂ္ဂိုလ် Mr. Robert O’Brien တို့အား သီးခြားစီ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပြီး အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ငွေကြေးရန်ပုံငွေအဖွဲ့ အကြီးအကဲ Ms. Kristalina Georgieva နှင့် ကမ္ဘာ့ဘောလုံး အဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌ Mr. Gianni Infantino တို့အား သီးခြားစီလက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့သည်။
၂။ နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်သည် Thai Red Cross AIDS Research Centre သို့ ၂-၁၁-၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင် သွားရောက် လေ့လာခဲ့ရာတွင် HRH Princess Bajarakitiyabha Narendiradebyavati နှင့် ယင်းဌာန၏တာဝန်ရှိသူများက HIV/AIDS ရောဂါအသိပညာ ပေးရေး၊ HIV ဝေဒနာရှင်များ အတွက် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုများ ပေးအပ်နေမှု အခြေအနေ၊ HIV ရှိ မိခင်များမှတစ်ဆင့် ကလေးသူငယ် များထံသို့ ကူးစက်မှု လျှော့ချရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ရှင်းလင်း ပြောကြားခဲ့ကြသည်။ ယင်းနောက် နိုင်ငံတော် ၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်သည် HRH Princess Soamsawali Korm Muen Suddhanarinatha နှင့် HRH Princess Bajarakitiyabha Narendiradebyavati တို့နှင့် HIV ရောဂါကာကွယ်တိုက်ဖျက်ရေးနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဆေးဝါး၊ နည်းပညာနှင့် အတွေ့အကြုံများ ဖလှယ်သွား နိုင်ရန်အတွက် မြန်မာ-ထိုင်း နှစ်နိုင်ငံပူးပေါင်း ဆောင်ရွက် သွားရေးအပြင် အခြားစိတ်ပါဝင်စားသော နိုင်ငံများနှင့် သုံးပွင့်ဆိုင်ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက် သွားနိုင်မည့် အလားအလာများ အပေါ် ဆွေးနွေးအမြင်ချင်းဖလှယ်ခဲ့ကြသည်။ ဆက်လက်၍ နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် သည် အဆိုပါ Centre မှ ဖွင့်လှစ်ထားသည့် HIV/ AIDS တားဆီးကာကွယ် တိုက်ဖျက်ရေး ဆိုင်ရာပြခန်းအတွင်း လှည့်လည်ကြည့်ရှု လေ့လာခဲ့သည်။
၃။ နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နှင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ် H.E. Mr. Narendra Modi တို့ ၃-၁၁-၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင် တွေ့ဆုံ ရာ၌ နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးပိုမိုတိုးတက်ခိုင်မာ လာစေရေး၊ ကုန်သွယ်ရေး၊ ပို့ဆောင်ရေး၊ ကုလားတန်ဘက်စုံသုံးစီမံကိန်း၏ အစိတ် အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည့် စစ်တွေဆိပ်ကမ်းအား ဆောလျင်စွာ အသုံးပြုလည်ပတ်သွားနိုင်ရေး၊ မြန်မာ-အိန္ဒိယနှစ်နိုင်ငံအကြား ကျန်ရှိနေ သည့် နယ်နိမိတ်သတ်မှတ်နိုင်ရေး၊ နှစ်နိုင်ငံ အကြား မော်တော်ယာဉ်များ သွားလာမှုဆိုင် ရာ သဘောတူစာချုပ် ဆောလျင်စွာ လက်မှတ် ရေးထိုးနိုင်ရေး၊ ရမည်းသင်းအမျိုးသမီး ရဲသင်တန်းကျောင်းအဆင့်မြှင့်တင်ရေး၊ ပြည်သူ့ ဝန်ထမ်းများ၏ စွမ်းရည်မြှင့်တင်ရေးနှင့် လူ့စွမ်း အားအရင်းအမြစ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိစ္စရပ် များအပါအဝင်နှစ်နိုင်ငံအကြား ပူးပေါင်းဆောင် ရွက်မှုများ ပိုမိုတိုးချဲ့ဆောင်ရွက်သွားရေး၊ နှစ်နိုင်ငံအကြား အဆင့်မြင့်ခရီးစဉ်များ အပြန်အလှန် စီစဉ်သွားနိုင်ရေး၊
ရခိုင်ပြည်နယ်အရေးကိစ္စတွင် အိန္ဒိယနိုင်ငံ အနေဖြင့် အပြုသဘော ဆက်လက်ကူညီပံ့ပိုး သွားရေးနှင့် အာဆီယံ-အိန္ဒိယ အကျိုးတူ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များနှင့် ပတ်သက်၍ ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ အမြင်ချင်း ဖလှယ်ဆွေးနွေးခဲ့သည်။
၄။ ရုရှားဝန်ကြီးချုပ် H.E. Mr. Dmitry Medvedev နှင့် ၄-၁၁-၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင် တွေ့ဆုံစဉ် မြန်မာ-ရုရှား ရှိရင်းစွဲ ချစ်ကြည် ရင်းနှီးမှု ပိုမိုတိုးတက်ခိုင်မာစေရေး၊ စွမ်းအင်၊ စက်မှု၊ မြို့ပြလေကြောင်း၊ ပညာရေးကဏ္ဍများ အပါအဝင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ပိုမို တိုးချဲ့ ဆောင်ရွက်သွားရေး၊ မြန်မာ-ရုရှား ကုန်သွယ် ရေးနှင့် စီးပွားရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ပူးတွဲ ကော်မရှင်အစည်းအဝေးကို နေပြည်တော်၌ ကျင်းပသွားရေး၊ အဆင့်မြင့်ကိုယ်စားလှယ် များအပြန်အလှန်လည်ပတ်ရေးနှင့် နိုင်ငံ တကာမျက်နှာစာတွင် ဆက်လက်၍ နီးနီး ကပ်ကပ် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားရေးကိစ္စရပ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ အမြင်ချင်း ဖလှယ်ဆွေးနွေးခဲ့သည်။ နိုင်ငံတော် ၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်က မြန်မာကျောင်းသား များ ပညာသင်ဆုပိုမိုတိုးမြှင့်ရရှိရေး၊ ပြည်သူ အချင်းချင်း ထိတွေ့ဆက်ဆံမှု ဆက်လက် မြှင့်တင်သွားရေးနှင့် နှစ်ဖက်အကျိုးဖြစ်ထွန်း စေမည့် ကုန်သွယ်ရေးနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု မြှင့်တင်ရေးနှင့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနများ အကြား ပိုမိုနီးကပ်စွာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များကို ထည့်သွင်းဆွေးနွေး ခဲ့သည်။
၅။ နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နှင့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသမ္မတ၏ အထူး ကိုယ်စားလှယ်၊ အမျိုးသားလုံခြုံရေးအကြံပေး ပုဂ္ဂိုလ် H.E. Mr. Robert O’Brien တို့ ၄-၁၁-၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင် တွေ့ဆုံရာ၌ မြန်မာ-အမေရိကန် နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေး ပိုမို တိုးတက်ခိုင်မာလာရေး၊ မူးယစ်ဆေးဝါး၊ လူကုန်ကူးမှုနှင့် တောရိုင်းတိရစ္ဆာန် တရား မဝင်ရောင်းဝယ်မှု တားဆီးကာကွယ်တိုက် ဖျက်ရေး၊ ကောင်စစ်ရေးရာကိစ္စရပ်များအပါအဝင် နှစ်နိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ ဆက်လက်တိုးမြှင့်သွားရေး၊ မြန်မာအစိုးရ အနေဖြင့် ရခိုင်ပြည်နယ်မှ နေရပ်စွန့်ခွာသူ များအား နှစ်နိုင်ငံသဘောတူစာချုပ်နှင့်အညီ ပြန်လည်စိစစ်လက်ခံရေးအတွက် ကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက်နေမှု၊ ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းများ ဖြစ်သည့် UNHCR၊ UNDP တို့နှင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်နေမှု အခြေအနေများအပြင် ဒေသတွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာရေးရာ အကျိုးတူ ကိစ္စရပ်များအပေါ် ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ အမြင် ချင်းဖလှယ် ဆွေးနွေးခဲ့သည်။
၆။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာငွေကြေးရန်ပုံငွေအဖွဲ့(IMF)၏ အကြီးအကဲဖြစ်သူ Ms. Kristalina Gerogieva အား ၃-၁၁-၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင် လက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့သည်။ ယင်းသို့တွေ့ဆုံရာတွင် IMF မှ မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ငွေကြေးနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ နည်းပညာအကူအညီများ ဆက်လက်ပေးအပ်သွားရေး၊ ဈေးကွက်စီးပွား ရေးနှင့် ဘဏ်လုပ်ငန်းများထွန်းကားဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး၊ ဘဏ်လုပ်ငန်း စွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်တင်လာရေး၊ ဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ် ပြောင်းလဲကျင့်သုံးစနိုင်ငံများ၏ ငွေကြေးနှင့် ဘဏ္ဍာရေးကဏ္ဍ အတွေ့အကြုံများ၊ အကောင်း ဆုံးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ဖလှယ်သွားရေးနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ အသွင်ကူးပြောင်းဆဲကာလ အတွင်း ကြုံတွေ့နေရသည့် စိန်ခေါ်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ အမြင်ချင်း ဖလှယ် ဆွေးနွေးခဲ့သည်။
၇။ ကမ္ဘာ့ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌ Mr. Gianni Infantino အား ၃-၁၁-၂၀၁၉ ရက်နေ့ တွင် လက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့ရာတွင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဘောလုံးအားကစားကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ မြန်မာအမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးဘောလုံး အားကစားသမားများ၏ အားကစားစွမ်းရည် မြင့်မားလာရေး၊ လူငယ်များအကြား ဘောလုံး အားကစားနည်းနှင့် ပိုမိုအကျွမ်းတဝင်ရှိလာ ရေး၊ ဘောလုံးနည်းစနစ်များ၊ ဘောလုံး အကယ်ဒမီများ၏ အရည်အသွေးမြှင့်တင်ရေး၊ ကမ္ဘာ့ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်နှင့် အားကစားနှင့် ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနတို့အကြား ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်သွားရေးနှင့် ကမ္ဘာ့ဘောလုံးသမား အကျော်အမော်များ မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက်၍ မြန်မာလူငယ်များနှင့် တွေ့ဆုံမှု များပြုလုပ်သွားရေးကိစ္စရပ်များအပေါ် ရင်းနှီး ပွင့်လင်းစွာ အမြင်ချင်းဖလှယ်ခဲ့သည်။ နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်က ကမ္ဘာ့ ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌအား မြန်မာလူငယ် များအကြား အားကစားအပေါ် ပိုမိုစိတ်ဝင်စား လာစေရေး၊ ကျန်းမာရေးနှင့်ကိုက်ညီသည့် လူနေမှုပုံစံဖြစ်ပေါ်လာရေး၊ အသင်းအဖွဲ့စိတ် ဓာတ် ပိုမိုရှင်သန်ထွန်းကားလာရေးနှင့် မြန်မာ့ ဘောလုံးအဆင့်အတန်းအား ယခင်ကဲ့သို့ အာရှထိပ်တန်းအဆင့်သို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိ ရေးအတွက် ကမ္ဘာ့ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်မှ ကူညီ ပံ့ပိုးပေးရန် အလေးထား ဆွေးနွေးခဲ့သည်။